ရွေးကောက်ပွဲ မဲလိမ်မှု ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တရားစွဲ — မြန်မာဌာန
ရန်ကုန်တိုင်း ခရမ်း၊ သုံးခွ၊ နဲ့ကိုကိုကျွန်း မြို့နယ် ၃ ခုကနေ အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် အရွေးခံခဲ့တဲ့ NDF ပါတီက ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ရှေ့နေ ဦးသိန်းဇော်ညွန့်က သုံးခွမြို့နယ် မဲရုံအမှတ် (၉) မှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို သက်သေပြပြီး တရားစွဲလိုက်တာပါ။
သုံးခွမြို့နယ် မဲရုံအမှတ်(၉) မဲရုံ ဝန်ထမ်းတွေက ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အတွက် မဲလိမ်ထည့်ခဲ့တာတွေ၊ NDF ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မဲကို ဖျက်ပြီး ပယ်မဲအဖြစ် ပြောင်းလိုက်တာတွေ၊ သူ့ကို မဲရုံအတွင်း ဝင်ခွင့်မပေးပဲ မဖွယ်မရာ ပြုမူဆက်ဆံခဲ့တာတွေကို သက်သေခံ အထောက်အထားတွေ စုပြီး တရားစွဲလိုက်တာလို့ သူက RFA ကို ပြောပါတယ်။
အမျိုးသားလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ အခန်း (၁၃) ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများနဲ့ ပြစ်ဒါဏ်များ၊ ပုဒ်မခွဲ (၅၉) နဲ့ (၆၃) ပုဒ်မခွဲနဲ့တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့် ရှိတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့က တရားစွဲလိုက်တာပါ။
ဥပဒေအရ ရက်ပေါင်း ၁၅ ရက်အတွင်း တိုင်ကြားနိုင်ပြီး အမှုဖွင့်နိုင်တယ်လို့ပြဌာန်းထားတာ ရှိတဲ့အတွက် သူ့အနေနဲ့သုံးခွရဲစခန်းမှာ တိုင်ကြားခဲ့ပြီး အမှုကိုလည်း တိုင်းရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က သဘောတူလိုက်ပြီလို့သုံးခွစခန်းမှူးက အကြောင်းကြားကြောင်း ပြောပါတယ်။
ရှေ့နေ ဦးသိန်းဇော်ညွန့်ကို RFA ဝိုင်းတော်သား ဦးဝင်းနိုင်က ဆက်သွယ် မေးမြန်း ထားတာကိုလည်း နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
U Thein Zaw Nyunt is GREAT and keeping the Kha Yan/Thon Gwa's role and history's diginity.
That location have so many leaders and activists in Burma since 1930.
So, we appreciate very much for our our Public of Burma.